Mucaaradka Bangladesh waxay diideen doorashadii ‘farcical’ waxayna codsatay codeyn cusub – Walaal24 Newss
December 31, 2018	1	By walaal24
Hogaamiyaha mucaaradka Bangladesh ayaa sheegay in doorashadii guud ee Axadda ay tahay mid “faracical”, isaga oo sheegay in wax kasta oo natiijo ah la diidi doono oo codsan doona in la qabto doorasho cusub.
Ugu yaraan 17 qof ayaa la dilay inta lagu guda jiray doorashadii ugu horreysay ee waddanka ee tobankii sano ee la soo dhaafay. Qodobo dhowr ah ayaa ka soo baxay tartanka maalintaas, iyaga oo ku andacoonaya in xukunka Awami League uu codadkiisa u dhiibay si uu u helo rikoodhkii saddexaad oo xiriir ah ra’iisal wasaaraha Sheikh Hasina.
“Waxaan ugu baaqeynaa guddiga doorashooyinka in ay caddeeyaan doorashadan aan caadiga ahayn ee doorashada, waxayna codsaneysaa doorasho cusub oo dowlad dhexdhexaad ah,” ayuu yiri Kamal Hossain, oo isku duwaya isbahaysiga xisbiyada mucaaradka oo rajeynayay in uu furo Hasina.
Isbahaysiga mucaaradka ayaa kulan la yeelan doona Isniinta si uu go’aan uga gaaro tallaabada xigta, Hossain ayaa ku daray shir jaraa’id saacado yar ka dib markii la codsaday in la xiro. Natiijooyinka hore waxay muujiyeen xisbigii Hasina ee u socday aqlabiyad ballaaran.
Xubno ka tirsan xisbiyo ka soo horjeeda ayaa isku dhacay maalintii oo dhan, taas oo raacday olole toddoba todobaad ah oo lagu soo rogay weerarradii lagu qaaday musharrixiinta, suxufiyiinta iyo xidhitaanka ballaaran ee dadka u ololeeya mucaaradka.
Ugu yaraan siddeed qof ayaa ku dhintay shilalka u dhexeeya shaqaalaha xafiisyada, halka saddex kale ay toogteen askar, oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaq mucaarad ah oo lagu tuhmay inay isku dayeen inay weeraraan xarun doorasho oo ku taal magaalada koonfurta Basharali. Xubin ka tirsan ciidamada amniga ayaa sidoo kale dilay dad firfircoon oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee mucaaradka Bangladesh (BNP), bilayska ayaa sheegay.
Salahuddin Ahmed, oo ah musharaxa BNP oo ka yimid Dhaka, ayaa la xiray markii uu ku sii socdey degaankiisa. Bilayska ayaa sheegay in xaaladaha weerarka aan wali la caddayn.
Hasaye, oo ah 71-jir, ayaa kor u qaaday koboca dhaqaalaha rikoodhka, laakiin wuxuu hoos u dhigay hay’adaha dimuqraadiga ee waddanku. Natiijada waxaa la filayaa in la ogaado subaxnimadii Isniinta.
Dhaka, caasimadda, ayaa si aad ah looga baxsaday ka dib markii shaqaale badani ay ku noqdeen tuulooyinkooda si ay u tuuraan codkooda iyo gawaaridooda oo dhan marka laga reebo wariyeyaasha iyo kormeerayaasha doorashada. Ilaa 600,000 oo shaqaale ammaan ah ayaa loo diray dalka oo dhan si ay u sugaan amar.
Maamulka ayaa xiray adeegyada 3G iyo 4G si loo xakameeyo faafitaanka waxa ay ugu yeeraan dacaayad. Dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka ayaa sheegay in tallaabadani ay sidoo kale ka hor istaagtay in ay soo sheegto wixii isbeddel ah ee cod bixinta.
“Waxaan helayaa fariin qoraal ah oo ku saabsan cod bixinta been abuurka ah, shaqaale cod-bixiye sharci-darro ah laga bilaabo saaka subax kasta daqiiqad kasta,” ayuu yiri Hossain horaantii maalintaas. “Tani waa sharaf aad u qaali ah dimuqraadiyadayada.”
Wakiilka Guardian ayaa loo diiday inuu galo saddex xarumo doorasho oo ku yaala Dhaka 30 daqiiqo ka dib markii codka la xidhay 4ta galabnimo, ayaa sheegay in saraakiisha hogaaminayaan in codadka horay loo tiriyay.
Guddiga doorashooyinka ee Bangladesh ayaa u sheegay Reuters in ay baaritaan ku sameeyeen eedaymo la xiriira cod-bixinta ka imanaysa dalka oo dhan. “Xagjirnimada ayaa ka imanaysa waddanka oo dhan, kuwa la baadho,” ayuu yiri SM Asaduzzaman, oo ah afhayeenka guddiga. “Haddii aan ka helno wixii xaqiijin ah ee ka yimaada waddooyinkeena markaas tallaabooyin ayaa loo qaadi doonaa iyada oo loo eegayo xeer kasta.”
Wiilkii Hasina, Sajeeb Wazed, ayaa sheegay in doorashadu si aad ah u nabadgelyeynayso marka laga reebo dhacdooyin dhawr ah. “Laakiin mucaaradku waxay kordhinayaan eedaymo been abuur ah,” ayuu ku qoray Twitter. “Iskuday rabshado sida ra’yiururinta ra’yiga ah waxay muujinaysaa in ay ka soo horjeedaan xisbiyada maamulka.”
Kooxaha mucaaradka ah ayaa sheegay in ololaha ugu horreeya ee Axadda ay tahay midka ugu badan ee lagu dhaleeceeyay taariikhda 47-sano ee dalka, isagoo sheegay in in ka badan 8,200 oo qof oo ka soo horjeeda Hasina la xiray, in ka badan 12,000 oo dhaawac ah.
Hasina ayaa horey u ahaan jirtay ra’iisul-wasaaraha ugu mudan taariikhda dalka. Guul lagu kalsoon yahay ayaa muujinaysa in codbixiyeyaashu ay diyaar u yihiin inay u dulqaataan burburinta hay’adaha dawliga ah iyo xuquuqda madaniga ah iyagoo beddelaya xasillooni siyaasadeed iyo koboc dhaqaale oo horseeday in saddex jibbaar loo xisaabiyo dalka.
Hasina, oo intooda badani ay qoys ahaan ku dhinteen afduub militari 1974-kii, ayaa ku dooday in xuquuqda bini’aadanku ay tahay mid walaac badan oo ku saabsan Bangladeshis badankeeda, gaar ahaan dadka reer miyiga ah ayaa ka walwalsan raashinka iyo shaqooyinka, iyada oo sheegtay in ay dawladdeedu bixisay.
“Waxaan rumeysanahay in dadku ay codkooda ku dhiiban doonaan si ay ugu biiraan Awami League si ay u sii wataan xoojinta horumarka,” ayuu Hasina u sheegay warfidiyeennada Dhaka ka dib markii uu codkiisa dhiibtay.
Waxay sheegtay in digniinaha xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee baahsan ay soo saartay kooxo sida Amnesty International iyo Human Rights Watch ay yihiin kuwo aan loo dulqaadan doonin si ay lacag u helaan.
Shahedul Anam Khan, oo ah sarkaal ka tirsan hawlgabka guud iyo fikradda fikirka, ayaa qoray: “Dimuquraadiyad iyo horumar ayaa loo sameeyay si ay u muuqdaan kuwo si gaar ah u kala go’a, xubnaha xubnaha ka ah xisbiyada iyo xildhibaannada oo sii maraya xaddidaadda horumarinta kharashka dimuqraadiyadda.”
Inkasta oo tirooyin caafimaad leh oo ku saabsan dhaqaalaha, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in sinnaan la’aanta ah ay korodhay a
Shirkii ka socday magaalada Garoowe oo galay maalintisii sadexaad maxaa ka soo kordhay?
Wasiirada Cafimaadka XFS oo xariga ka jartay xarunta Daaweynta iyo Qaliinka Haweenka isku-furanka (Fistula)
Howlgal lagu dilay dagalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay G/Shabeellaha Hoose
Dalka Mareykanka oo digniin laga soo saary Kuleyl daran maalmaha soo socda
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay dagaalka u dhaxeeya Soomaliland iyo Puntland ee ka socda degaanka Tukaraq